Nepali Rajneeti | रामचन्द्रले पाए राजतन्त्र फर्किन लागेको सुइँको ? डरले बर्बराउन थाले !
कार्तिक ७, २०७८ आइतबार १०४ पटक हेरिएको
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललै यति बेला राजतन्त्र कतै फर्किने पो हो कि भन्ने ड’रले सताइ’रहेको छ।
वर्तमान राज्य व्यवस्थालाई लिएर जनताले प्रश्न उठाउन थालेपछि पौडेललाई राजतन्त्र फर्किने ड’र लागेको हो।
पौडेललाई राजतन्त्र फर्किन सक्ने डर रहेको शनिबार पुष्टि भयो। पौडेलले शनिबार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पूर्वराजाले उपदेश दिनु राम्रो नभएको बताए। कैलालीको धनगढीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
‘आज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले धम्क्या’उन थाले, उपदेश दिन थाले, यो राम्रो होइन,’ पौडेलले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पूर्वराजाले उपदेश दिने हो ? नेपालका नेताहरूले यो सुनेर बस्ने हो ?’
पौडेलले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई संकटबाट बचाउन सबै दल एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पौडेलले पार्टीको महाधिवेशन तोकिएको समयमा गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
शनिबार नै कञ्चनपुरको बेलौरीमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र नं १ ले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले बा’ढी र पहि’राेपी’डितप्रति सहानुभूति प्रकट गरे ।
उनले पी’डित नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानार्कषण गराएका छन् । नेता पौडेलले भीमदत्त नगरपालिकाको महाकाली तटीय क्षेत्रमा बाढीले गरेको क’टानकोसमेत स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।
लोकतन्त्रलाई सङ्क’टबाट बचाउन एकताबद्ध हुनुपर्छः वरिष्ठ नेता पौडेल
पाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई सङ्कटबाट बचाउन सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कञ्चनपुरको बेलौरीमा आज नेपाली कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र नं १ ले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले बाढी र पहिराबाट पीडितलाई सहानुभूति व्यक्त गरे।
उनले पी’डित नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानार्कषण गराए । उनले दक्षिण क्षेत्रमा बाढी र डुबानले परेको क्षतिको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेका थिए । पौडेलले पार्टीको महाधिवेशन तोकिएको समयमा गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
उनले पार्टीलाई स’ङ्कटबाट जोगाउन पनि एकता आवश्यक रहेको औँल्याए । बेलौरीमा कार्यकर्ता भेटघाट पनि नेता पौडेलले भीमदत्त नगरपालिकाको महाकाली तटीय क्षेत्रमा बाढीले गरेको कटानको समेत स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । यो खबर साभार गरियको हो ।